သက်တန့်ချို: ကျွန်ုပ်နှင့်မနုဿလူသားစားကျွန်း ( ဇတ်သိမ်းပိုင်း)
Posted by သက်တန့်ချို at 3:13 PM
မေဇင် April 30, 2010 at 11:05 AM
ဇတ်သိမ်းသွားတဲ့အထိ ဘာမှ မဖြစ်ကြလို့ တော်ပါသေးရဲ့....ဒါနဲ့ ညံ ကောင်ဆိုတာကို အရင်ကမသိခဲ့ဘူး...ခု စာထဲမှာပါသလောက်ပဲ သိတယ်။ သေချာမသိဘူး ။း) နောက်တစ်ခေါက်လောက်...လူအင်အား လက်နက် အင်အား အပြည့်အစုံနဲ့သွားရင်...လူရိုင်းတွေလောက်က အေးဆေးပါး))
ညီညီ April 30, 2010 at 3:24 PM
လာပြီးဇတ်ပေါင်းသွားတယ် ကိုသက်တန့် ရေ ... ဖတ်ရင်းနဲ့ ဇတ်ကောင်းခန်းတွေရောက်မှ ကိုယ့်ဆရာက
ဇတ်ရှိန်သတ်တယ် .. လူဆိုး ..စာများများရေးနိုင်ပါစေခင်ဗျာ..
ဆောင်းနှင်းရွက် May 2, 2010 at 12:12 AM
ညံ ကောင်ဆိုတာ အခု မှ ပဲ ကြားဖူးတော့တယ် ..
ဘာဖြစ်မလဲ နဲ့ ဖတ်လာတာ ...
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ...
အားပေးသွားတယ် ကိုသက်တန့်ရေ ..
ဗဟုသုတ တစ်ချို့လည်း ရသွားတယ် ..
♥ကိုဇော်♥ May 2, 2010 at 8:15 AM
ကောင်းတယ် ဆရာချိုရေ. . .ကောင်းတယ်.. .
ကိုယ်တိုင်တောင်မှ ဝင်ကြိတ်ပစ်ချင်တာနော်. .
ဒါမျိုးဆို သိပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားတာ. . .
ညံကောင်နဲ့ တွေ့ရင် ကိုယ် မညံ့ကြောင်း ပြလိုက်ချင်တာ. .
Evy May 3, 2010 at 8:44 AM
လာဖတ်နေတာတော့ ကြာပါပြီ၊ ခုမှ Comment ၀င်ရေးဖြစ်တာ။ ဒဂုံရွှေမျှားရဲ့ ၀တ္ထုတွေဖတ်ရသလိုပါဘဲ။ အားပေးနေပါတယ်။ များများရေးနိုင်ပါစေ။
ဝေလေး June 2, 2010 at 12:55 PM
အပိုင်းလိုက်ဖတ်လာရင်း စာအုပ်တင်ထားတာလေးတွေ့လို့ download လုပ်သွားပါတယ်။ ဝေလေး ဆိုဒ်မှာ link ထားခွင့်ပြုပါ။ :)
မိုးနှင်းပွင်. September 16, 2011 at 4:12 PM
ဖတ်ရတာ အက်ရှင်ကားတစ်ကားကို ကြည့်နေရသလိုပဲ.... မိုက်တယ်!